muqdisho waxaa sanadahi danbe Camiray Dayuus Baro Qurba Joog « AYAAMO TV
muqdisho waxaa sanadahi danbe Camiray Dayuus Baro Qurba Joog
891 Views Date March 13th, 2014 time 5:53 pm
waxaa sanadahi danbe magaalada muqdisho ku soo badanayey qurba joogta kuwaasi oo u muuqda in aay isoo dalxiis tagayaan dalkii hooyo oo in mudo ah aay ka maqnaayeen.
ugu horeyn aan ku biloowne xeebto liido ayaa noqatay goob sixnad badan isla markaasina laga dareemayo dhaqamo kala duwan oo aay dadka qurba joogta ahi soo kordhiyeen.
tusaale gabdhaha ku dhaqan magalada muqdisho ma aheyn gabdho loogu bartay in aay qaatan dharka qafiifka ah ee jirkooda ka muuqanaya balse liido hadii aad ku aragto dad nuucaas u dhaqmaya waa dadka qurba joogta ah oo muqdisho loogu baxiyay dayuus baro.
hadaba macnaha dadka ugu baxiyeen qurba joogta dayuus baro oo ayaamo.com tix raac ku samaysay ayaa waxaa lagu ogaaday in dadka qurbaha ka so laabtay boqolkiiba %80 lumiyeen dhaqankii soomaaliyed maadama aay la noolaan jireen dadyoow kale oo dhaqan iyo diin ahaanba ka duwan.
diyaasbarada ama qurba joogta waxaa aay badankood ka guursadan magaalada muqdisho waloow aay yaraatay sanadahi danbe sababo la xariira dhaqan xumo aay ku sameyeen gabdho aad u da yar oo la siiyay ama loo guriyay.
Oday ka mid ah odayaasha muqdisho oo magaciisa ka gabsaday sababo amaan ayaa wuxuu yiri gabadha yaan la iska siin duyuus barada sababtana wuxu ku macneeyay in aay duyuus barada dumurka kaga tagaayaan meel aan ilaahey raali ka aheyn oo ula jeeday dabada.
Qurba joogta oo qarashaad badan ku baxin jiray guurka ayaa mooda in haatan hoos u dhac ku yimid aaminaad la,aan dartiis iyo dhaqan xumada aay dalka keenen .
qurba joogta qaar baa furtay hoteelo ama maqaaxiyo waloow aay aad ugu qiima sareeyan kuwii horay dalka ugu jiray dadka qaar waxaa mooda in dhaliil gaara u haayan ganacsiga qurba joogta marka waydiiso waxaa aay ku leeyahiin sixir bararka waxaa inoo keenay qurba joogta.
qurba joogta sido kale waxaa lagu bartay arxan daro maadama ayaamo.com horay da badan ugu daawadeen muuqaal muujinaya wiil markii uu guursatay gabar hadana iskaaga tagay mudo markii uu maqna markii uu qaadi lahaa furiin usoo diray taasi oo keentay in gabadhi waalato